People Archives - MoviesFan
Lady Gaga ဟာ A Star Is Born ဇာတ်ကားကြောင့် ချစ်သူနဲ့ စေ့စပ်ထားတာကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာလား?
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် Gaga နဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ၄၉ နှစ်အရွယ် Christian Carino တို့ဟာ ၂၀၁၇ နှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကတည်းက စတွဲနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Christian ရဲ့ အလုပ်အကိုင်က Gaga ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အလုပ်ဖြစ်နေတာမို့ သူတို့ရဲ့ ပတ်သက်မှုက လုပ်ငန်းသဘောအရကနေ စတင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်မှာပါ။ (Christian ဟာ Justin Bieber, Miley Cyrus, Jennifer Lopez စတဲ့ နာမည်ကျော်တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Gaga ဟာ သူမနဲ့ Read More
celebrity news, dating news, Hollywood, People
ချစ်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေကြားက Zac Efron နဲ့ Selena Gomez
ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လို့ တင်စားနိုင်တဲ့ ဟောလီးဝုဒ်က လူငယ်မင်းသား Zac Efron ဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ အချစ်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရှုပ်အထွေးနဲ့ ကောလဟာလသတင်းတွေ နည်းခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီ ၂၀၁၉ နှစ်ဦးပိုင်းထဲမှာတော့ Zac ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ကောလဟာလတစ်ခုဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တောမီးလို ပြန့်နှံ့နေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီသတင်းက တခြားတော့ Read More
တကယ်စွံသွားပြီဖြစ်တဲ့ Jennifer Lawrence
ဟောလီးဝုဒ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ထင်ရှားအောင်မြင်တဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် လင်းလက်တောက်ပနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော Jennifer Lawrence ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ အသည်းကို ဒီ ၂၀၁၉ နှစ်ဦးပိုင်းလေးမှာ အစိမ်းလိုက် ခွဲသွားခဲ့ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဟာ Single ဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့တုန်းက အင်တာနက်မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ Read More
Brad Pitt ဟာ ချစ်သူအသစ်နဲ့ တကယ်ပဲ တွဲနေခဲ့ပြီလား….?
ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကျော်မင်းသား Brad Pitt နဲ့ ဇနီးသည်ဖြစ်တဲ့ Angelina Jolie တို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်တုန်းက လမ်းခွဲခဲ့ကြတာကို အားလုံးလည်း သိပြီးသားနေမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Pitt ဟာ သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးတွေကို အုပ်ထိမ်းခွင့်ရအောင် ကြိုးစားရင်း၊ တရားဥပဒေနည်းလမ်းအရ အပြီးအပိုင် ကွာရှင်းနိုင်ဖို့ ကိစ္စတွေအတွက် လုံးပန်းနေရလို့လားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ လူလွတ်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ အချစ်သတင်းအသစ်တွေ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာတော့ Read More